Zavatra 10 Ny vehivavy rehetra te-hahatsapa amin'ny fifandraisana - Fifandraisana
Ho an'ny vehivavy manolo-tena tanteraka amin'ny fifandraisana , mba hahafahany manipy ny fony sy ny fanahiny ao, dia tsy maintsy miaina fahatsapana miavaka maromaro izy.
Ireo no zava-dehibe ilaina manome ny fototry ny finoany ny fifandraisana.
Raha tsy misy azy ireo dia tsy ho afaka ny ho tena tena izy izy haneho ny fanahiny tsy milanja sy tsy misaron-tava.
Misy fahatsapana 10 toy izany amin'ny rehetra, ary izy ireo dia ampahany amin'ny iray manontolo, toy ny sombin-tsarimihetsika izay tokony hapetraka alohan'ny hijerena ny sary feno.
1. Te-hahatsapa ho voaro sy tsy manana ahiahy izy
Ny vehivavy dia maniry ny hahatsapa ho voaro amin'ny vadiny.
Tsy miresaka ny amin'ny vatany fotsiny izany, fa koa ny fahasalamany ara-pientanam-po.
Te hahafantatra izy fa tsy misy ampahany amin'ny olony hanafika amin'ny fomba rehetra ao anatin'izany ny vatany, fahatokisan-tena, fatokisan-tena, maha izy azy, fomba fijery, fitondran-tena ary ny safidiny.
Rehefa mahatsiaro ho matoky izy fa tsy misy maharatsy azy avy amin'ny fiarahana, dia afaka manomboka mamela ny tena izy hamirapiratra izy.
Ny lafiny fandriam-pahalemana dia avy amin'ny fahafantarana fa ny sakaizany dia nanambola koa tamin'ny fifandraisana, fa ny ankamaroany dia avy amin'ireo teboka sivy hafa manaraka.
2. Te-hahatsapa fankasitrahana izy
Amin'ny maha-antsasaky ny mpivady iray, ny vehivavy dia te-hahafantatra fa ny mpiara-miasa aminy dia tena mankasitraka azy sy izay rehetra entiny.
Te hahatsapa fa tadiavina izy Tsy isalasalana fa manome lanja azy ny mpiara-miasa aminy amin'ny hoe iza izy no tokony hahafantatra fa feno fankasitrahana izy ireo manana azy amin'ny fiainany.
Mivelatra hatrany amin'ny ny kely misaotra anao amin'ny fiainana andavanandro, amin'ny fanambaràna fankasitrahana feno fanahy iniana sy lehibe kokoa.
3. Te-hahatsiaro hajaina izy
Ny vehivavy ankehitriny dia te-ho hita ho mpiara-miasa mitovy amin'ny fifandraisana ary, amin'ity tanjona ity, te-ho izy nohajaina tamim-panajana .
Ny fomba fijeriny dia mitombina mitovy amin'ny an'ny sakaizany, ary ny andraikiny dia tsy latsa-danja noho izany.
Te-hihainoana azy - henoina tsara - izay isian'ny heviny ary misy ny fanapahan-kevitra raisina amin'ny alàlan'ny fifanakalozan-kevitra.
zavatra hitohizan'ny resaka
Mila mino izy fa ny mpiara-miasa aminy dia mihevitra azy ho mitovy ary tsy mody manao izany fotsiny.
4. Te-hahatsapa fahatokiana sy fahatokiana izy
Ny fifampitokisana dia mandeha amin'ny lafiny roa amin'ny fifandraisana, ary ny vehivavy dia maniry ny hahatsapa fa samy matoky azy ny mpiara-miasa aminy ary afaka matoky ny mpiara-miasa aminy izy.
Ity dia mety ho sakana sarotra tanterahina ho an'ny vehivavy iray izay efa tapaka ny fahatokisany azy taloha, saingy io no iray amin'ireo fahatsapana lehibe indrindra amin'ny resaka fahombiazan'ny fifandraisana.
Ity fitokisana ity dia tsy maintsy mitombo ao anatiny, entin'ny fihetsiky ny sakaizany fa tsy ny tenin'izy ireo fotsiny.
Toy izany koa, tsy afaka miatrika tsy fahatokisana ny sakaizany izy raha izy ireo saro-piaro na mampiahiahy isaky ny miresaka amin'olon-kafa izy dia maty antoka ny fiarahana.
5. Te-hahatsapa ho karakaraina izy
Raha tsy mila te-ho tohanana ara-bola na hokarakaraina izy dia mila fantatry ny vehivavy fa mikarakara azy fatratra ny vadiny.
Tiany izy ireo hitandrina ny amin'ny filàny miova, hamaly amin'ny fomba izay mahatonga azy hahatsapa ho miavaka .
Rehefa maneho ny fiahiany marina ny fihetseham-pony sy ny fahasalaman'izy ireo izy dia fantany fa vonona ny hiezaka mafy izy ireo hanandrana sy hanampy.
Ity no karazana fikarakarana tena iriny indrindra.
Ahoana ny fomba itokisana indray: Fianarana hamela olona hiditra na dia eo aza ny fahoriana taloha
15 Fomba Fitiavan'ilay Zazavavy Vaky Tsara tarehy
Fomba 6 tsy am-bava atosikao ny sakaizanao
13 Antony Tiako Tiako ianao amin'ny sombintsombiny
maninona no sarotra be ny mahita lehilahy
6. Te-hahatsapa ho marefo izy ary ho takatra izany
Ny olona tsirairay - lehilahy na vehivavy - dia manana fotoana ahatsapan'izy ireo fa marefo.
Mampiseho io marefo io raharaha lehibe, ary ho an'ny vehivavy dia ilaina ny mahatsapa fa afaka manao izany amin'ny fahalalana fa hihaona amin'ny fahatakarana izany.
Te hanana ny fahaizany maneho ny alahelony, ny fanaintainany ary ny alahelony an-karihary izy ary hahazo soroka hitomaniana, sofina hiresahana ary famihinana fampiononana manome toky.
Tsy te-hasaina 'hihoatra izany' na 'hiseho endrika be herim-po' izy satria tsy manao afa-tsy ny mamahana ny antony fototry ny fahalemeny.
7. Te-hahatsiaro ho voamarina izy
Ny teboka teo aloha momba ny marefo dia azo hitarina amin'ny fanamarinana ny eritreritra sy ny fahatsapana ny vehivavy rehetra.
Na toy izany no tsapan'ny olon-tiany na tsia dia ilaina ny hanaovan'izy ireo fa izany no tsapany ary tsy zavatra azon'izy ireo ovaina na toherina izany.
Raha tezitra izy dia tadiaviny ho fantatry ny olon-tiany ho toy ny fihetseham-po mitombina izany, ary toy izany koa ny fihetseham-po rehetra mety ananany.
8. Te-hahatsapa ho laharam-pahamehana izy
Rehefa miditra amin'ny fifandraisana izy dia maniry ny hahatsapa ny vehivavy fa manandanja izy.
Fantany fa tsy afaka ny ho lohalaharana foana izy - hisy fotoana tsy maintsy hikarakarana ny fianakaviana sy ny asa - saingy te hahafantatra izy, amin'ny ankabeazany, ny laharam-pahamehany dia manao laharam-pahamehana azy.
Tsy midika izany fa manapaka ny fifamatorana amin'ireo namana, fialamboly ary andraikitra hafa rehetra, dia midika izany fa ny fifidianana azy matetika kokoa noho ny hafa - ary indrindra rehefa mila azy izy na mangataka azy.
ahoana no tsy saro-piaro sy tsy milamina loatra
9. Te-hahatsapa ho azo antoka izy
Ny fisalasalana dia zavatra manimba - manana ny fahaizana misakafo amin'ny fiarahana izy ireo, ary miteraka olana aza tsy nisy teo aloha.
Ka ny vehivavy dia te-hahatsapa antoka fa ny ho aviny dia miankina amin'ny sakaizany.
Te hijery azy ireo izy ary hahafantatra amin'ny fomba voajanahary ao am-pony fa olona azon'izy ireo atao ny mandany ny androm-piainany sisa.
Tsy izany ihany fa tsy maintsy matoky izy fa mitovy ny fahatsapany azy ary misy ny fanoloran-tena tsy azo hozongozonina sy iraisana.
10. Te-hahatsiaro ho tiana izy
Saika tsy mandeha intsony ny milaza fa ny vehivavy dia te-hahatsapa ho tian'ny sakaizany izy dia maniry ny hiaina izany toetra tsy hay faritana izay avy amin'ny fatorana marina sy avy am-po eo amin'ny olona roa.
Tena misy anefa ny fitiavana rehefa tratra ireo fahatsapana sivy teo aloha.
Raha tsy ampy ny iray amin'izy ireo dia hitolona hiroborobo ny fitiavana, fa raha vao eo daholo izy ireo dia saika tsy azo ihodivirana ny fitiavana.
Mbola tsy azonao antoka ve ny fomba hahatonga ny vehivavy hahatsapa fomba iray? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
nandainga tamiko ny sipako ary tsy zakako izany
ny fomba hahafantarana bandy tianao
inona no handefa hafatra aorian'ny daty
ahoana no ataonao manidina fotoana
ahoana no ahafantaranao raha misy olona tianao any am-piasana tianao